यसकारण चाहिन्छ पिपिई – Health Post Nepal
डा. मनोरदिन सैयद
२०७६ चैत १४ गते १४:०१
कोरोना भाइरसको संक्रमणले अहिले पूरै संसार आक्रान्त छ। चीनको वुहानबाट फैलिएको यो भाइरस संक्रमणका लागि नेपाल पनि उच्च जोखिममा छ।
अहिलेसम्म नेपालमा ३ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिनासाथ राज्यले लकडाउनको घोषणा गरेको छ। यो लकडाउनलाई सारा नेपाली जनताले साथ दिनु उत्तिकै जरुरी छ। किनकि यसबाट बच्ने एउटा प्रमुख उपाय भनेकी सामिजक दूरी कायम गर्ने हो। त्यस्तै मास्कको प्रयोग, साबुनपानीले हात धोइरहनु अनि स्यानिटाइज्ड गर्नु सुरक्षाका अरु उपाय हुन्।
त्यस्तै आम नागरिक अत्यावश्यक (उच्च ज्वोरो, सुख्खा खोकी,स्वास-प्रस्वासमा मुस्किल,जिउ दुख्ने र अत्यधिक कमजोरी महसुस आदि ) नभइ सकभर अस्पताल जानुहुँदैन।
अनि राज्य, सरकारले भारइस प्रभावित देशबाट आएकाहरुलाई निगरानी(क्वारेन्टाइन)मा राख्ने, वृद्ध, बालबालिका तथा दीर्घरेगी, गर्भवतीहरुको विशेष हेरचाह गर्न आवश्यक छ।
संसारभर आजसम्म ५,३२,२३७ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखियकोमा २४,०८९ जना को मृत्य भएको छ। संक्रमित र मृत्युदर हेर्दा जनस्तरबाट रोकथामका उपायहरु अबलम्बन गरेमा मृत्यदर केही न्यूनिकरण सकिन्छ भन्नेमा दुइ मत नै छैन।
एक महिना पहिला मात्रै इटाली मा केवल ५ जनामा कोरोना देखिएको थियो। तर नियमहरु कडाईका साथ पालना नगर्दा भाइरसको संक्रमण हावाजस्तै फैलियो। यसमा सरकार अनि आम नागरिकको वेवास्ता उस्तै जिम्मेवार छन्।
इटालीमा मात्रै कोरोना संक्रमणका कारण ३७ जना स्वास्थ्यकर्मीको नै मृत्य भयो। नजिकैका मुलुक भारत र पाकिस्तानका स्वास्थ्यकर्मीमा समेत कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ।
अब यो अवस्थामा नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाको बारेमा सरोकारवालाहरुबाट गम्भीर तथा चौतर्फी चासो व्यक्त भएको छ।
कुनै कारणवश स्वास्थ्यकर्मीलाई यो भाइरसको संक्रमण भएमा अस्पताल आउने अन्य धेरै व्यक्तिमा यो संक्रमण तुरन्तै फैलिनसक्छ।
त्यसैले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने चिकित्सकलाई बिरामी जाँच्दा लगाइने विशेष पिपिइ (व्यक्तिगत सुरक्षा कवच )को बन्दोबस्तीमा नेपाल सरकार संवेदनशील हुनु अति आवश्यक छ।
पिपिइबिना बिरामी जाँच्नु भनेको बिना हतियार सैनिकलाई युद्ध मैदानमा पठाउनु भन्दा पनि बढी घातक हुन्छ।
किनकि सैनिकको हकमा उसकोमात्रै ज्यानको जोखिम होला वा उसको टिम पराजित होला तर एउटामात्रै स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण भयो भने
उसको आफ्नो परिवार, समाज र अस्पतालमा आउने अन्य व्यक्तिलाई समेत खतरा हुन्छ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुले पनि यो परिस्थितिसँग जुध्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई पिपिइको अनिवार्य व्यवस्था, छुट्टै ज्वरो क्लिनिक,
आइसोलेसन बेड , छुट्टै आकस्मिक समिति (जसले नागरिक समाज,टेकु अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्यको जिम्मा लिने ) बनाउनु पर्दछ।
पिपिइमा बिशेष प्रकारको हाते पन्जा, गाउन, जुत्ता कभर, शीर कभर, स्वास फेर्न सहज बनाउने यन्त्र, बिशेष चस्मा लगायतका सामान हुन्छन्।
हुन त अहिले विश्वभर नै पिपिइको माग उच्च छ। जसका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै स्थानीयस्तर बाट समेत बनाउन सकिने उपाय सुझाएको छ ।
नेपालमा पनि केही चिकित्सकहरु मिलेर यसको घरेलु निर्माणमा लागेका छौँ तर, यो उत्पादन नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रमाणित भएपछिमात्रै प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ।
यो विषम परिस्थितिमा चिकित्सकीय जोखिम रोकथामका उपाय अबलम्बन गर्न, हतोत्साही नभई सजग रहनु आवश्यक छ। पिपिइबाट पूर्ण सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी र संयमित आम नागरिकको साथ भयो भने कोरोना महामारीविरुद्धको यो लडाइँ जित्न त्यत्ति गाह्रो छैन।
(डा. सैयद स्वास्थ्य विश्लेषक हुन्)